Hurumende Yokurudzirwa Kuranga Zvakaomarara Vanoroodza neKuroora Vanasikana Vasati Vabva Zera
Hurumende iri kukurudzirwa kudzika mitemo yakaomarara kuranga vose vanoroodza kana kuroora vanasikana vasati vabvazera izvi zvinoisa hupenyu hwavo munjodzi uye kukanganisa remangwana ravo.
Izvi zvinotevera nyaya yanetsa munyika yekufa kwaAnna Machaya panonamatirwa nemamwe mapostori mumusha weMafararikwa, kwaMarange musi wa15 Chikunguru.
Anna akafa achisungunuka achibva angovigwa pedyo nepanonamatirwa apa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi mumashoko kuvatori venhau vanoti mapurisa akasunga murume wacho Hatirarai Momberume anozivikanwa nekuti Evans Momberume ane makore makumi maviri nematanhatu.
Vabereki VaAnna, VaEdmore Machaya maAmai Shy Mabika vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekunyebera mapurisa kuti ainge afa ndiMemory Machaya akaberekwa muna 1999 nekuda kuvanza zera chairo remwana ainge ashaya.
Asi ongororo yemapurisa kuburikidza nemagwaro ari kuchikoro yakaratidza kuti Anna aive nemakore gumi nemashanu. Vabereki VaAnna vari kupomerwawo imwe mhosva yekuda kupa VaMomberume mumwe mwanasikana ane makore mapfumbamamwe kuti aroore.
Gweta raVaMomberume VaBrian Majamanda vakaudz Studio 7 kuti vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwanasikana ari pasi pemakore anotenderwa uye zvakare nemhosva yekunzi vakakonzeresa kufa kwemwana uyu.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition panyaya dzekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume Muzvare Margaret Mutsamvi vati vatambira basa raitwa nemapurisa kusvika parizvo kunyangwe paine zvirehwarehwa.
Vati mutemo unofanira kuvandudzwa kuti mwanasikana abvumidzwe kuita zvepabonde ave nemakore gumi nemasere kwete gumi nematanhatu sezviripo ikozvino.
Kunyangwe mwana chinzi anokwanisa kuita zvepabonde aine makore gumi nematanhatu, anonzi anokwanisa kuroorwa ave nemakore gumi nemasere
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reGirl Child Network Zimbabwe Amai Shingirai Nyirenda vanoti dambudziko rekurodzwa kwevanasikana rakomba munyika. Vati senzira yekuchengetedza kodzero dzemwanasika, panofanira kupihwa zvirango zvakaomarara zvekuti munhu anofunga kaviri asati abata mwana chibharo.
Mashoko aya atsinhirwa nemunyarikana weAfrican Union panyaya dzekurwisa kuroodzwa kwevanasikana vasati vabva zera kana kuti African Union Goodwill Ambassador Amai Nyaradzai Gumbonzvanda vati vakuru vemachechi nevakuru pachivanhu vanofanira kubuda pachena kuti vana havaroodzwe vasati vabva zera.
Vatiwo zvakakosha kurwisa nyaya dzehurombo mumhuri nekuti vamwe vabereki vanoguma voroodza mwana nekushaya chekubata,
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Muzvinafundo Paul Mavima vaudza Studio 7 kuti kazhinji nyaya dzekuroodzwa kwevanasika dzinoitika muchivande asi vati vakazvinzwa vanotora matanho sehurumende kuona kuti kodzero dzemwanasikana dzaremekedzwa.
Sangano reUnited Nations riri kukurudzira Zimbabwe kuti idzike mutemo wekuti kuroora mwana asati abva zera imhosva uye kumisa tsika iyi. Dzimwe tsika dzechivanhu uye mamwe makereke zvinonzi ndizvo zviri kupa kuti dambudziko iri risapere munyika.